Travel World: January 2012
Ten of the Most Breathtaking Views of the Ocean around the World
Posted: 31 Jan 2012 01:48 PM PST
If you travel mainly to enjoy the most spectacular views on earth, then you certainly shouldn't miss out on these ocean views. These are quite possibly the best views you'll see inalifetime, and...
How to Enjoy Skiing without Breaking your Wallet
Posted: 31 Jan 2012 11:09 AM PST
Some people think that skiing is only for the rich because of the steep prices of the world's most popular ski resorts. Little do people know that it enjoyingaski trip does not have to cost an arm...
Required: Java Developer w/ Huge WPS Exp. at Minneapolis, MN
Position: Java Developer w/ Huge WPS experience
This developer will support development and testing of necessary workflows and components using WPS on Mainframes platform. This developer is expected to be experienced in WPS and WID. In addition to being familiar with the WPS/WID, this individual should be highly technical, andaself-starter able to quickly grasp the application we are developing and also assist the staff with his (or her) detailed knowledge of WPS.
Phone : 331-472-7754
Email : wajee@exatechinc.com
Posted by Travel at 2:19 PM0comments
Role Sun Solaris Administrator
please send the profile nagesh@sriventech.com
End Date 1 month (With possible extension)
Job Description 1.Install Solaris 10 operating system and upgrade EIS pataches.
2.Create users and passwords
4.installing backup clients on netbackup environment.
5.ability to troubleshoot hardware (servers,consoles,switches routers etc)
6.ability to maintain large number of unix servers (data centres)
7.having extensive experience in rolling out new systems, maintaining, upgrading, replacing and improving long-term performance of the systems.
8.expericne in opening service requests with oracle MOS.
9.support during the nights in other words change control management.
10.perform on call duties.
11.coordinate with customer on break fix issues.
13.attending team meetings and beateam player."
phone:703-842-4305 ext 305
VB/VC++ Consultant @ Wayne, PA
Please Send Resumes to : vrao@bartronicsamerica.com
Title: VB/VC++ Consultant
· Responsible for working with marketing, clinical, regulatory, and service organizations to ingest requirements to resolve product issues and complaints.
· Should produce software specifications and project plans.
· Should develop the technical solutions required include software using VB6 on windows based PS*s.
· Knowledge of DLL*s and custom communications isastrong need.
· Exposure to Medical Domain & Regulations - A plus
· VB 6.0, VC++ Concepts, OOPS, MS Access, SQL Server, Architecture and Design patterns, Database Interaction, Version Controllers.
Posted by Travel at 1:28 PM0comments
NEED ORACLE EXADATA ARCHITECT FOR PHILADELPHIA, PA - 6+ month
ORACLE EXADATA ARCHITECT
The job holder will design, implement, and support logical ndatabase management structures, as well as database recovery, back-up, security, archiving and conversion strategies. S/he focuses on enhancing database performance through proactive monitoring, reporting and tuning and provides technical assistance and mentoring to various staff. S/he also collaborates with application development teams on various database issues and takesalead role in problem resolution.
Minimum6- 8 years experience required. Job holder must have previously implemented strategies for database architecture and consulted on migrating, integrating and selecting platforms foravariety of wide-impact applications. S/he must have expertise in the major functions of relational database platforms and the design, development and maintenance of relational databases that manage object data including multiple Object-Relational Database Management System technologies, platforms and products. Must also have significant experience with designing and integrating complex, heterogeneous databases. Job holder must be knowledgeable in performance considerations for complex, distributed environments and aware of industry benchmarks for multiple technology environments.
Oracle Exadata experience isamust
Oracle Financials is highly preferred
Posted by Travel at 12:39 PM0comments
Required: Peoplesoft Admin at Torrance, CA
Position: Peoplesoft Admin
Current PeopleTools is 8.20 (both finance and HR) is on windows 2000. Client is looking for minor tools upgrade – from windows 2000 to windows 2003 with tools of 8.22; Selected candidate will be PSADMIN for the project. PSADMIN with Strong in PeopleSoft administration experience; He will be responsible for tools upgrade , Installation, configuration (web server, app server, report server..) client interactions. Responsible for sanitary check (Testing, QA ) of environment before releasing to client/ development team. Maintenance of upgraded environments till go-live.
Posted by Travel at 12:37 PM0comments
Oracle Functional Procurement in Madison, WI for3months
Oracle Functional Procurement
Purchasing and financials. Pur incl iProc and iSupplier
Sr. Oracle SOA Suite Developer in Louisville, KY
Sr. Oracle SOA Suite Developer with Order to Cash PIP integration experience
The selected resource will possess strong Oracle SOA Suite development and installation experience as well as, technical hands on Oracle Order to Cash PIP integration experience. Ideally the consultant will have working knowledge around Siebel to integrate with PIP to allow for both solutions to communicate effectively. Additionally the consultant will have excellent Oracle Fusion middleware experience; AIA framework and foundation pack with experience in modification.
3 –5years ORACLE SOA Suite experience2 –4years Siebel experience2 –3years Order to Cash experience integrating PIP2 –4years Oracle Fusion middleware experience1 –3years AIA framework (2.5 version minimum) experience1 -3 years AIA Foundation pack (experience in modification of AIA foundation pack) experience1 -3years Order to Cash PIP (preferred, but other Siebel PIP experience will be considered) experience
Posted by Travel at 10:25 AM0comments
Business Objects Developer @ Tampa,FL
Title : Business Objects Developer (Must Need H1b,or GC,Citizens)
Expert 5yr+ expert programmer, hands on in BO
? 3+ years of experience in development of BO reporting
? Good knowledge of Data warehousing Concepts, understanding business process/requirements
? Good knowledge with dimensional and relational database design
? Should have worked on BO webi and have knowledge of BO Xcelsius
? Oracle database SQL, UNIX scripting isaplus
Posted by Travel at 6:20 AM0comments
STC is the leading provider of high-performance hydraulic telescopic
cranes, mechanical crawler cranes, truck mounted cranes, hydras,
forklifts, trailers odc transport, lattice boom truck cranes, hotmix
plants, asphalt plants, drum mix plants for use in all kinds of
For More Information Visit on : http://stccranes.com/
Posted by Travel at 3:01 AM 1 comments
Re: တောင်ကြီးဒေသ MTT မှတာဝန်ခံအရာရှိသို့
ပုဂံ mtt က မန်နေဂျာ ရန်အောင်က calibre ရှိလို့ ရာထူးရလာတာမဟုတ်ပါဘူး..
abcd တောင် ဘယ်နှလုံးရှိမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူး..( မယုံမရှိနဲ့ ကိုယ်တွေ့ .. )
ရုံးကား t-2000 တောင်ငှားစားနေတာပါ..
သူ့ အတွက်လည်းဝိုက်...အပေါ်အတွက် လည်းပို့ ပြီး လည်သလိုစားနေတဲ့သူပါ..
၀န်ကြီးကိုသာစာတင်ပြီးတိုက်ရိုက် by name နဲ့ တိုင်ပါ ...
( ဘာတိုင်ချက်ဖြစ်ဖြစ် )
သက်ဆိုင်ရာ အခြားဝန်ကြီးများထံပါ မိတ်တူ ပေးပါ.. ( သဘောပေါက်ပါတယ်နော် )
On Jan 28, 10:59 pm, winzaw oo5 <winzaw...@gmail.com> wrote:
> မြန်မာနိုင်ငံတွင်ထင်ရှားသောသာသန နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သည့်အင်းလေးကန်အတွင်းရှိ
> လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့၊ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာန
> နှင့်သက်ဆိုင်ရာတို့နှင့်ဆွေးနွေးပြီး ဘုရားရင်ပြင်အနှံ့ တွင်(((
> သို့မဟုတ်ပါက ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြောင်း
> အမှန်တွေပါဘဲ ဒေါ်ခင်သီတာအေး ပြောတာလည်း၊ ကျွန်မတို့ကတော့ အမြင်မတော့ရင်
> ဝင်ပြောလွန်း အားကြီးလို့၊
> အများရဲ့ အမုန်းခံ ခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်မျက်စေ့ရှေ့မှာ မြင်ရင်တော့ ပြောရမှာပါဘဲ။
> ကိုယ်နဲ့ အနေသာကြီးဆိုပေမဲ့၊
> ဧည့်လမ်းညွန်တိုင်းမှာ ဒီလိုစိတ်ထားမျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။
> အခုလို့ Guide မပါဘဲ၊ FIT တွေကိုရော ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြမလဲ။
> အဲဒါတွေက ဝန်ကြီးဌာန တွေက လေဆိပ် အဝင်တွေ၊ နယ်စပ်ဝင်ပေါက်တွေကနေ အဝင်တွေမှာ၊
> ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ စည်းကမ်း ဥပဒေ တွေကို Information အနေနဲ့၊ဧည့်သည်တွေဆီကို
> လုပ်ဆောင်စရာတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ တဖြေးဖြေးချင်းတော့ ရအောင်
> ပိုပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ မှီလာနိုင်အောင်ပေါ့။
> Ma Yunn San eain
> 2012/1/27 khin thidar <gorose.myan...@gmail.com>
> > အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရားမှာ ဖြစ်နေတာလေးတွေ တင်ပြပါရစေ
> > ကျွန်မ ၂၆ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီခွဲ လောက်က ဘုရားကိုရောက်ပါတယ် အတော်ကို
> > ရာသီကအေးနေတာပါ ဘုရားကျောက်ပြားတွေကလဲ အေးစက်နေပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဧည့်သည်ကို
> > ဘိနပ်ရော ခြေအိပ်ပါ ချွတ်ခိုင်းပြီးမှဘုရားပေါ်တက်ပါတယ်
> > ဒါပေမဲ့ ဘုရားပေါ်မှာ လူတော်တော်များများ ခြေအိပ်တွေနဲ့ပါ ကျွန်မက
> > ဧည့်သည်ကို Guide ပါရင်တော့ ဒီနိုင်ငံက စည်းကမ်းတွေကို Guide
> > တွေကလိုက်နာရန်ပြောဘို့ တာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြနေပါသေးတယ်
> > ပြောနေတုန်းဘဲ ကျွန်မဧည့်သည်က တခြားဧည့်သည်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုပြပါတယ်
> > သူ့လက်ထဲမှာ ဧရာမဘိနပ် ၂ရံ ဒီတိုင်းကိုင်လာပါတယ် ကိုင်ရုံတင်မကသေးဘဲ
> > ဘုရားဆင်းတုတော်တွေထားတဲ့ အတွင်းခန်းအစပ်တောင်ရောက်ပါတော့မယ်
> > ဘုရားလုံခြုံရေး အဘ တယောက်က ဘိနပ်မယူရဘူးလို့လာပြောတာကို
> > ခါးခါးသီးသီးတခုခုပြောပြီး လှည့််ထွက်သွားတော့ ကျွန်မ တော်တော်
> > ဒေါသထွက်သွားပါတယ် ဒါနဲ့သူ့လက်ကို ဆောင့်ဆွဲပြီး ဒီဘုရားက
> > ငါတို့လူမျိုးတွေရဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရား နင်ဒီလိုလုပ်တာ
> > စော်ကားတာနဲ့အတူတူဘဲလို့ ပြောပစ်လိုက်တယ် နင့်ဘိနပ်ဘယ်သူမှမခိုးဘူး
> > အပြင်မှာသွားထားဆိုပြီး ခပ်မာမာပြောမှ လှည့်ထွက်သွားတယ်
> > ဘုရားလုံခြုံရေးအဘက ငါတို့ပြောတာကို သူတို့က နားမထောင်ဘူးသမီးရယ်လို့
> > ပြောပြတယ်
> > ကဲ ကိုယ့်ဧည့်သည်ရှေ့မှာ ဒီလိုတွေထိ ဖြစ်ရတာ ကောင်းပါတော့မလား
> > ဒါနဲ့ အောက်ဆင်းခဲ့တော့မှ ပိုဆိုးပါလေရော ယူနီဖေါင်း နီညိုဝတ်ရတဲ့ Tour
> > Co တခုက guide တယောက်နဲ့သူ့ဧည့်သည်အားလုံး ခြေအိပ်တွေနဲ့ပါ ဒါနဲ့ ညီမလေး
> > ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်လာရတာလဲဆိုတော့ ဘိနပ်ချွတ်တဲ့နားက ဘိနပ်စောင့်တဲ့
> > အဒေါ်ကြီးက ခြေအိပ်ဝတ်လို့ ရတယ်ပြောလို့တဲ့
> > ကဲဟေ့ မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီး အဲဒီဒေါ်ကြီးကို သွားပြောရပြန်ရော သူကတခါ
> > ဘာလွှဲချပြန်လဲဆိုတော့ ဂေါပက က အေးလို့ ခြေအိပ်ဝတ်လို့ပြောတယ်တဲ့ ကျွန်မ
> > ဂေါပက ကိုသာ တခါတက်ပြီးမေးရင်တော့ ကျွန်မ ဧည့်သည် လဲ ကျွန်မကို
> > ဖနောင့်နဲ့ပေါက်တော့မယ် ဒါနဲ့ဘဲ မနိုင် နိုင်ရာနဲ့ လှည့်ခြောက်ခဲ့ရတယ်
> > အဒေါ် ခင်ဗျားကို ၀န်ကြီးနဲ့တိုင်မယ် ၀န်ကြီးက ဘုရားပေါ်ခြေအိပ်ဝတ်ရင်
> > ဖမ်းမယ်လို့ပြောထားတာ မသိဘူးလားလို့
> > ကဲ ဆိုးလိုက်တဲ့ အဖြစ်ပါ အဲဒီတော့ ဖောင်တော်ဦးဘုရားက ကိစ္စကို ဘယ်သူတွေ
> > တာဝန်ယူကြမှာပါလိမ့် ရှမ်းပြည်က Guide များ ထိထိရောက်ေ၇ာက်
> > တာဝန်ယူဘို့တော့ ကောင်းပါတယ် ဒါမှမဟုတ်လဲ ဟိုအဒေါ်ကြီးပြောသလိုဘဲ
> > အားလုံးဝတ်ကြဟေ့လို့သာ ဗျိုးဟစ်ထားလိုက်ကြတော့ပေါ့
> > ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာလဲ ဘိနပ်ကြီးတွေစီးပြီး သွားနေလိုက်ကြတာ တကဲ့ကို
> > ရှမ်းပြည်ရဲ့ အထွဋ်အမြတ်ဆိုတဲ့ ဖောင်တော်ဦးဘုရားမှာ
> > ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာတော့ တကဲ့ကို စိတ်မကောင်းမိပါဘူး
> > တာဝန်သိသူများ တာဝန်ရှိသူများ ချမ်းချမ်းစီးစီးနဲ့ သွေးအေးပြီး
> > ဘာမပြောညာမပြောေ၇ငုံ နှုတ်ပိတ်မနေကြပါနဲ့လို့ အမြင်မတော်တဲ့ သူက
> > မနေနှိုင် မထိုင်နှိုင် ၀င်ပြောလိုက်ရပါတယ်
> > ခင်သီတာအေး
> > On 1/27/12, Thaung Naing Oo <thaungnaingoo....@gmail.com> wrote:
> > > မချောချော
> > > ဟုတ်ပါတယ်။
> > > မှန်ပါတယ်။
> > > သောင်းနိုင်ဦး
> > > 2012/1/25, chawchaw mirror <chawchawmir...@gmail.com>:
> > >> ဧည့်လမ်းညွှန်တွေ မိမိ တို့ ဧည့်သည် တွေ ကို သိပ်ပြီး အလို
> > >> မလိုက်သင့်ဘူးလို့ ဘဲမြင်ပါတယ်။
> > >> 2012/1/25 Thaung Naing Oo <thaungnaingoo....@gmail.com>
> > >>> ဧည့်လမ်းညွှန်များ သတိပြုစရာ (၂၉)
> > >>> မန္တလေး ရွှေနန်းတော်ကျောင်း
> > >>> (၂၃.၁.၂၀၁၂) ပြင်သစ်ဧည့်လမ်းညွှန်Tour Group နှင့်
> > >>> ရုရှားဧည့်လမ်းညွှန်Tour Group တို့ နှစ်ဖွဲ့ ပြဿနာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
> > >>> ပြင်သစ်ဧည့်လမ်းညွှန်ရော ပြင်သစ်ဧည့်သည် ၂၅ ယောက်ပါ
> > >>> ရွှေကျောင်းအုတ်လှေခါးထိပ်အထိ ဖိနပ်များစီးပြီးတက်ခဲ့ကြပါတယ်။
> > >>> အုတ်လှေခါးထိပ်မှာ ဖိနပ်များကို ချွတ်ထားခဲ့ပါသော်လည်း
> > >>> ခြေအိတ်များကိုတော့ မချွတ်ဘဲ ရွှေကျောင်းထဲမှာ လှည့်လည်ကြည့်ရှုနေခဲ့ပါတယ်။
> > >>> ၄င်းကိစ္စကို ရွှေကျောင်းတွင် တာဝန်ကျနေသော ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနမှ
> > >>> တာဝန်ကျအမျိုးသမီးများက ခြေအိတ်များချွတ်ပါရန် စာလည်းကပ်ထားသည့်အပြင်
> > >>> လူကိုယ်တိုင်လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း လုံးဝနားမထောင်ခဲ့ပါ။
> > >>> ဂရုမစိုက်ပါ။
> > >>> အဲဒီအချိန်မှာ ရုရှားဧည့်လမ်းညွှန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ
> > >>> သူ့ဧည့်သည်များနှင့်အတူ ရွှေကျောင်းတော်ကို လေ့လာကြည့်ရှုဖို့
> > >>> ဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရုရှားဧည့်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက
> > >>> သူ့ခြေထောက်နာနေလို့ ခြေအိတ်ဝတ်ပါရစေလို့ ပြောသော်လည်း သူ့ဧည့်လမ်းညွှန်က
> > >>> ဘာသာရေးအရတားမြစ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်နေလို့ မဖြစ်မနေချွတ်ရမှာ
> > >>> ဖြစ်ကြောင်းပြောပြီး ခြေအိတ်များကို ချွတ်စေခဲ့ပါတယ်။ သို့ပါသော်လည်း
> > >>> ရွှေကျောင်းပေါ်ရောက်တော့ ပြင်သစ်ဧည့်သည်များ ခြေအိတ်စွပ်ထားတာတွေ့တော့
> > >>> ရုရှားဧည့်သည်များက သူ့ရဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်ကို ကွန်ပလိန်းတက်ပါတော့တယ်။
> > >>> အဲဒီတော့ ရုရှားဧည့်လမ်းညွှန်က ပြင်သစ်ဧည့်လမ်းညွှန်ကို ဧည့်သည်များ
> > >>> ခြေအိတ်ချွတ်ပေးပါရန်ပြောပါသော်လည်း ဂရုမစိုက်သည့်အပြင်
> > >>> ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့် အော်ဟစ်၍ နှင်ထုတ်ပါတယ်။ ရုရှားအမျိုးသမီး
> > >>> ဧည့်လမ်းညွှန်ဟာ ရုရှားဘာသာစကားအပြင်
> > >>> ပြင်သစ်ဘာသာစကားပါတတ်ကျွမ်းသူဖြစ်သဖြင့်
> > >>> ပြင်သစ်လိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်ဧည့်လမ်းညွှန်ဘက်မှ
> > >>> ပြင်သစ်ဧည့်သည်များကလည်းပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်
> > >>> မကြားဝံ့မနာသာစကားရိုင်းများစွာဖြင့် ဝိုင်း၍
> > >>> အော်ကြီးဟစ်ကျယ်စကားများရန်တွေ့ကြကာ ဆူညံပွက်လောရိုက်သွားပါကြောင်း
> > >>> ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနဝန်ထမ်းများမှ ၄င်းတို့၏ အထက်အရာရှိထံ Daily Report
> > >>> တင်ပြခဲ့ပြီး၊ ၄င်းရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနမှ
> > >>> ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဦးစီးဌနသို့ အမည်များနှင့်တကွ
> > >>> အကြောင်းကြားစာတင်ပြထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
> > >>> သောင်းနိုင်ဦး
> > >>> သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးကော်မတီ
> > >>> မန္တလေးဇုံ၊ မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း
> > >>> ၂၅.၁.၂၀၁၂- Hide quoted text -
Posted by Travel at 11:59 PM0comments
အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် ရေးထားသော ''စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ ပညာ''
ဆောင်ပုဒ်၏ မူလအစသမိုင်းကြောင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို သိရှိပါက
Re: Tourism Community အတွက် ဒိုမိန်းနဲ့ ဖိုရမ်တစ်ခု လုပ်ချင်ပါတယ်။
ကို Thomas ရေ
အဲဒီအချိန်ကတဲက MTGA ကိုပေါ်ပေါက်လာစေချင်လို့ ဒိုမိန်းတွေဝယ်ခဲ့တာ ၊ tourismtalk.net ဆိုတဲ့ဒိုမိန်းတစ်ခုလဲပါတယ်။ myanmarguides.org နဲ့ myanmarguides.net ဆိုရင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ထဲကဝယ်ခဲ့တာပါ ၊ လိုရင်ကြိုက်တာယူသုံးပါ။ Hosting လဲ Free လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ပေးရတဲ့ moderator လိုမလုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ တခုရှိတာ.. guide တွေအတွက်သီးသန့် forum/community site လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် tourismtalk.net လိုဒိုမိန်းက industry တခုလုံးကိုကိုယ်စားပြုတာဆိုတော့ ကျန်တဲ့လူတွေကိုရေးလာ ပြောလာအောင် ဖိတ်ခေါ်ရမယ်။ အခု travelmyanmar group မှာရေးနေတာguide တွေအတွက် guide တွေကရေးတာပိုများနေတယ်။ တနည်းပြောရရင်ဒိုမိန်းအသစ်မှာ Travel Agent, Tour Operator, Airline အစရှိတဲ့သူတွေပါဝင်လာအောင်နေရာပေးရမယ် ။ ဖိတ်နေရုံနဲ့မရဘူး။ မဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးတွေပါလာရင် ကျန်တဲ့လူတွေက ရောသမမွှေ ဆိုပြီးသိပြီးသား သတင်း ကို ဒီမှာလာမဖတ်တော့ဘူး ။ မူရင်းဆိုဒ်မှာအကုန်ရှာတတ်ကြတယ်။ ပညာရှင်ဆန်ဆန်ရေးကြရမယ်။ comment ပေးတဲ့သူကဘယ်လောက်အောက်တန်းကျကျ ဆဲနေရင်လဲကိုယ်ကပြန်မတုန့်ပြန်ရဘူး ။ ဒါဆိုရင် ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မှ တရားမင် ဆိုတာလို.. ရေးသူကိုအားထားလာမှာပါ။ Forum Ethic ကိုထိမ်းနိုင်ရမယ်။
Tourism Industry တိုးတက်ဖွင့်ဖြိုးပါစေ..။
2012/1/28 Thomas Latt <thomasjrlatt@gmail.com>
လွန်ခဲ့ တဲ့ ၂၀၀၇ နှစ်ဦးပိုင်းလောက်မှာ thorntree လိုမျိုး ဖိုရမ် တစ်ခုလုပ်မယ် ဆိုပြီး ကိုနောင်း၊ ကျနော် နဲ့ ဖရန်ကီတို့ တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက target audience က FIT or Individual Travelers တွေကို ပါ။ ကိုနောင်းမှာ အိုင်ဒီယာ အသေးစိပ်ရှိတယ်။ သူအားရင် သူနဲ့ လူချင်းတွေ့ ပြီးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုကျော်ထင် က tourism industry ကပဲလား။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ချင်တာလဲ။ business orient လား industrial support သက်သက်လား။
2012/1/28 Nyi Nyi Frankie <nyinyi.frankie@gmail.com>
ကောင်းပါတယ်။ ကျနော့်မှာလည်း ဝယ်ထားပြီးသာဒိုမိန်းလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ စဖို့ကလက်တွန့်နေတာ။ ရေရှည် moderate လုပ်မယ်သူ၊ maintain လုပ်မယ့်သူလဲရှိမှဖြစ်မှာမို့။ လောလောဆယ်လဲအလုပ်များနေကြတာမို့ပါ။ ကိုကျော်ထင် ကျနော့် ဆီကို private mail ပို့ပေးထားပါလား။ ကျနော်တို့ဖုန်းပြောကြည့်ကြတာပေါ့။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/vrYbAnGU_GgJ.
Rm. A-3, Ground Floor, Thitsar Road, Baho Zay Junction,
Block 8, South Okkalapa, Yangon, Myanmar.
Tel. 09.49761392, 01.706117.
Fax: ++ 95 1 560 855
Email: info@radiant.com.mm, radianttour@gmail.com, radiant.reservation@gmail.com
Posted by Travel at 5:23 PM0comments
Nomadic Matt's Travel Site: How MuchaHoliday in Thailand Costs
Posted: 30 Jan 2012 07:06 AM PST
Thailand can be as expensive or inexpensiveacountry to visit as you want it to be. This isacountry where you can stay in $3 USD per night rooms or $1000 USD per night resorts. Twenty cent street food or 300 dollar gourmet dinners. Thailand really runs the gambit. When my friends came to visit last December, they budgeted $1,700 USD for their3week trip. “No problem,” I said, “that's more than enough for Thailand. This country is cheap.” But what I realized as I traveled with people onalimited time frame, is that there is big difference in budgeting forabackpacking trip versus budgeting foraholiday.
It requiresawhole different mentality. It’salot easier to do that when you can average out your expenses overafew months instead ofafew weeks. Onavacation, you tend to race around trying to see as much as you can, which can drive up your costsalot.
Thailand isavery cheap country to live and travel around. I hardly spend much money here. But that changed when my friends came and why that changed is important for anyone planning to come to Thailand. While my friends were here, I spentalot of money. For the 24 days we traveled, I spent $1,596.27 USD or $66.51 dollars per day. Here's the numbers breakdown (all prices are in in Thai Baht):
Transportation (public buses, trains, taxis) – 1470
Ferry to, around, and from the islands – 1875
Hiking in Khao Sok – 1200
Movie and Popcorn (Sherlock Holmes2– don't see it!) – 320
Misc (bug spray, toothbrush, etc) – 363
Medicine (I popped my ear drum scuba diving!) – 1,890
Food (street food, seafood dinners, international meals in Bangkok) – 11,000
Web stuff – 890
Total Spent: 47,888 Baht or $1,596.27 USD
Note: $1 USD = 30 Baht.
For Thailand, I think that isalot of money. I tell people that backpacking around Thailand costs $30-35 USD per day depending on how much alcohol you consume and how many days you spend on the islands, where costs are higher. Most of the time, I spend less than that. I just stayedaweek in the northern city of Chiang Mai and I only spent about $25 USD per day. That included accommodation (private room with bathroom), local food, Starbucks, the occasional Western meal, andafew drinks.
So Why Did I Spend Double?
Though my intention was to do "Thailand onabudget", as I traveled with my friends, I realized something I forgot long ago. When time is limited and this is might be one of two big trips all year, you don't want to scrape every penny. Vacations don't need to costafortune but if you aren't traveling all the time, then staying in the cheapest place to make your money last becomes less of an issue. You want nice things.
You travel faster. You take planes, not 12 hour trains. You cram more activities into your day. You pamper yourself more. You eat nicer meals.
And my friends definitely wanted all the above.
That’s not to say I don’t thinkavacation in Thailand can’t be done cheaper. It can. I thinkabudget of around $50 USD per day would be perfect forashort vacation to Thailand. You don’t need to spend as much as I spent. I spentalot of money going out, using the internet for work, and seeingadoctor. If I cut out those expenses, my average drops to 1,421.16 Baht or $47.31 USD per day. That's more expensive thanabackpacker budget but really good foratrip to Thailand.
Flights so you don't have to spend time on long bus rides.
Meals that include local restaurants and cheap street food as well as delicious seafood dinners and some delicious international food in Bangkok.
Budget guesthouses withafew "splurge" nights thrown in.
Some tours and activities.
Andalittle extra wiggle room just in case.
Pretty much the essentials of any good, relaxing holiday.
While all the money-saving tips mentioned on my website can be applied to any style of trip you decide to take (saving money is universal), the speed in which you travel onavacation changes the dynamic of how you spend money. We could have savedalot if we skipped the flights and took the train but my friends didn’t have the time to spend 12 hours onatrain. We flew, which during peak season, is expensive.
This experience brought reminded me how accelerated travel requires us to be more vigilant in our efforts to save money. In the rush to see everything, you can spendalot of money before you even realize it. I’ll admit that the budget traveler I normally am went out the door on this trip. I would normally never fly around Thailand, would skip the expensive resorts, and wouldn’t eat as much international food as I did with my friends.
A three-week vacation in Thailand might not be as cheap asathree-month backpacking trip but it can still be inexpensive so long as you watch where your money goes and don’t forget about budgeting in your quest to see everything.
Posted by Travel at 5:19 PM 1 comments
(very HOT position) Senior .NET developer (C# ASP.NET) in White Bear Lake, MN
Senior .NET developer (C# ASP.NET)
need someone who can start this coming Monday, 2/6
Also.. will needacar to travel to White Bear Lake from Edina each day.. about 30 minutes. The technology is very cool!!! Client is developingaKiosk application that will dispense iPads for use/rental etc.. it'sacutting edge, exciting project foraDeveloper. THIS IS HOT!!!!!!!!!!!!
Posted by Travel at 2:02 PM0comments
Oracle HR developer in Huntington WV
Oracle Developer - HR
Standard HR Tables and config
Posted by Travel at 12:56 PM 1 comments
Kindly go through the below requirements and respond ASAP with updated profile and the below required details.
Duration:3-6Months CTH
Rate: $45/Hr on CTH
If you comfort and feel this isaright match for your profile, Please send me updated word format resume along with the below details as well ASAP to speed up the interview process.
Work Authorization (If H1-B –Provide Validity):
Any Interview/ Pipelines (Yes/No):
For any further assistance if required, you can reach me at ravikanth@axiustek.com or call me on
571 250 6783.
Contact No: | 5712506783|
Posted by Travel at 9:48 AM0comments
Oracle MDM Functional Lead Consultant in Indianapolis, IN
Oracle MDM Functional Lead
Oracle MDM Functional Lead for an Oracle Financial R12 implementation.
The selected resource needs to understand the direction of customer and supplier creation processes.
Support team in ensuring requirements and solution design are aligned with direction set.
Actively participate in MDM requirements sessions to support future releases of solutions.
Ensure that solutions meet business requirements of Finance EBS Finance Modules and process for 11i and R12 (CORE 11i and BOLT R12).
Continuous input and review of all requirements and design documents related to Customer and Supplier master data.
Actively participate in data modeling workshops. This would requireastrong AR background and understanding of the customer structure in both 11i and R12. Coordinate with R12 AR technical team to make sure that solution design is aligned as much as possible with future UCM data module. Support AR team in mapping of data elements.
Identify data that needs to be cleansed leveraging IDQ tools. Develop an approach to address data cleansing (automated vs. manual, business rules, etc.), and work with business, functional and technical team to execute the data cleansing approach.
Support the conversion team with Customer and Supplier master data conversion. Coordinate trouble shooting efforts for errors found related to master data conversion or creation/update processes during testing and infant care.
7+ years' experience required
5 - 7yrs of work experience in the IT Industry in Oracle ERP suite
3-5 yrs specific experience with Finance and Oracle AR module (11i and R12). Preferred experience in AP module. Preferred experience with Universal Customer Master or Customer Hub solutions.
Strong functional understanding of the customer data module (11i and R12).
Preferred experience with supplier data module in 11i.
Experience of Master Data cleansing and conversion
Ability to work independently, have strong organizational and communication skills
Ability to work across groups
Able to think big picture and apply to working details
Posted by Travel at 8:11 AM0comments
SAP ABAP Consultant in New York (US Citizens and GC Holders only)
US Citizens and GC Holders preferred.
- At least5years of hands-on experience in ABAP development including ABAP objects and conventional programming in NW2004 and NW2004s environments.
- Strong ABAP debugging techniques.
- Strong understanding of application layer especially in the areas of FI, MM,SRM, SCM and SD.
- Workflow, ALE/EDI experience isaplus.
- Prior ABAP experience with the FI, MM-PUR, MM-LIV, SD, SCM, and SRM modules is desired.
The Internal Systems Group is seeking an SAP ABAP consultant with 5+ years of experience. The candidate will be involved in all aspects of the product life cycle including requirements gathering and analysis, design, coding in ABAP, application scenario testing, implementation, and administration. Strong communication and interpersonal skills are required. The successful candidate will possess excellent problem-solving and debugging skills.
Re: သက်ဆိုင်သူများ အဆင်ပြေသလို လုပ်ကြပါဦး။
-ရှမ်းလေး(ကိုထင်ကျော်)၏ကားများသည် တိုးပါးတဲ့ရာသီမှာ ရွှေလီလိုင်းဆွဲပါတယ်။
-မဟာမုနိမှာ FIT တွေကို ထိုင်ပြီးဓါတ်ပုံရိုက်ကြဖို့
On 1/30/12, Myo <myomyanmarguide@googlemail.com> wrote:
> ကျွန်တော် ဒီနေ့ မန္တလေး၊ အမရပူရ၊ အင်းဝ ခရီးစဉ် လည်ပတ်နေပါသည်။
> ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်
> ပါတ်သက်သော ယာဉ်အမျိုးမျိုးတို့ မလုံမလောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
> ထိုမလုံမလောက်မှုများကို အဆင်ပြေစေရန် အဆင်ပြေသလို ခရီးသည်တင်လိုင်းများမှ
> မော်တော်ယာဉ်များကိုလည်း အသုံးပြုနေရသည်။ ကျွန်တော်ဒီနေ့ လည်ပတ်နေရသော
> မော်တော်ယာဉ်မှာ ရွှေလီ-မန္တလေး မော်တော်ယာဉ်လိုင်းမှ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး
> ဖြစ်သည်။ အလျည်းသင့်လို့ ခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ်ကို သုံးစွဲနေရသော်လည်း
> မော်တော်ယာဉ်မောင်းမှာ လွန်စွာဖော်ရွေ၊ စိတ်ရှည်၊ သီးခံတက်သောသူ
> တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် အင်းဝမှ အပြန် အမရပူရမြို့အ၀င် တိုးဂိတ်တွင်
> ပြသနာ စပါတော့သည်။ သာမန် ၄၅ ယောက်စီး ခရီးသည်တင် Tour Car တစ်စီးမှာ
> အမရပူရမှ အထွက်လမ်းအသုံးပြုခ 2000 ကျပ်၊ အမရပူရသို့အ၀င် 2500 ကျပ်
> ပေးဆောင်ရပါသည်။ ကျွန်တော့်ကားဆရာ အမရပူရမှ အထွက် အခက်အခဲမရှိ။ အင်းဝမှ
> အပြန်အမရပူရအ၀င်တွင် ကားဆရာ 2500 ကျပ် ပေးသည်ကို တိုးဂိတ်မှ
> တာဝန်ခံအမျိုးသမီးက လက်မခံ။ ပုံမှန် Tour Car မဟုတ်သဖြင့် 3500 ကျပ်ပေးဟု
> တောင်းတော့သည်။ ကျွန်တော့် ကားဆရာမှ ခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ်မဟုတ်ကြောင်း
> တိုးဆွဲနေသည့် ကားဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသောအခါ လက်ခံပေ။ ထိုအခါ
> ကျွန်တော်ကားဆရာမှ 3500 ကျပ်အတွက် ငွေရပြေစာတောင်းသော အခါလည်း မပေး။ 3500
> ကျပ်ပေးပါမှ ဂိတ်ဖွင့်ပေးမည်ဟု ဆိုပါသည်။ တကယ်လို့ 2500 ကျပ်ပဲပေးမည်
> ဆိုပါက ကတ္တားပေါ်တက်ပြီး အလေးချိန် ချိန်ရမည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုသို့
> ဖြစ်နေစဉ် ကျွန်တော်တို့ ကားနောက်တွင် တခြားကားများပါ အကုန်
> စောင့်ဆိုင်းကုန်ရတော့သည်။ နောက်ဆုံး မဖြစ်ညစ်ကြယ် မျက်နှာဖြင့် ငွေ2500
> ကျပ်ကို ယူပြီး သူ့ရှေ့ရှိ ပလတ်စတစ်ခြင်းထဲ ပစ်ထည့်ပြီး
> ဂိတ်ဖွင့်ပေးပါသည်။ ဒီကိစ္စတွင် ကျွန်တော်တို့ကားမှ ပိုငွေ1000 ကျပ်ပေး
> လိုက်ရင်ပြီးသွားမှာပဲဟု တွေးမိပါလိမ့်မည်။ သို့သော်
> ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသော၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ဆီ လျှောက်လှမ်းနေသော
> အချိန်ကာလတွင် တမင်တကာ ညစ်ကြယ်ပြီး လမ်းအသုံးပြုခ ပိုက်ဆံကို
> အဆင်ပြေသလိုတောင်းနေသည်မှာ မဖြစ်သင့်ပေ။ မပေးပါက ကတ္တားချိန်ရမည်ဆိုသည်က
> ပိုဆိုးတော့သည်။ ဒီကိစ္စကို အနည်းနှင့် ကျွန်တော့်အဖွဲ့မှ ဧည့်သည်များ
> ရိပ်မိကုန်တော့သည်။ နိုင်ငံတော်မှ မည်သို့ပဲ အစစရာရာ အဆင်ပြေအောင်
> ပြုလုပ်နေသော်ငြားလည်း ယခုကဲ့သို့ အောက်ခြေမှ လုပ်ချင်သလို
> လုပ်နေခြင်းသည်လည်း တကယ်တော့ နိုင်ငံတော်အတွက် မည်သို့မှ ရှေ့ဆက်ရန်
> မလွယ်ကူနိုင်ပေ။ အဆောက်အအုံတစ်ခုသည် အောက်ခြေအုတ်မြစ်ကောင်းမှ
> နောက်တစ်ခုကတော့ မန္တလေး မဟာမုနိဘုရားကြီးအတွက် ကင်မရာကြေးနှင့်
> ဧည့်သည်များအတွက် အဆင်မပြေမှုများပင်ဖြစ်သည်။ မခင်သီတာအေး ပြောသလို VIP
> ဆိုတာရှိသေးသလားနှင့်တော့ နည်းနည်း ပါတ်သက်နေသည်။ ကျွန်တော်ဧည့်သည် ၁၈
> ဦးနှင့် ဒီနေ့မနက် မဟာမုနိရောက်ခဲ့သည်။ ကင်မရာကြေးအား ဧည့်သည်များကို
> ကြိုပြောထားသဖြင့် ထုတ်ပေးကြသည်။ ကျွန်တော်မှ ကင်မရာကြေးကောက်ခံသူအား
> ကင်မရာ ပေးဆောင်ပြီးသူအမျိုးသမီးများအတွက် ဘုရားကြီးရှေ့ VIP နေရာမှ
> ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့် တောင်းသောအခါ စီစဉ်ပေးပါသည်။ ထိုနည်းသူ
> ကိုယ့်အိတ်ကိုထမ်း (FIT) အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလည်း ထိုနေရာသို့ ၀င်ရောက်ပြီး
> ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါသည်။ ကျွန်တော် ကြိုတင်ပြောထားသဖြင့် ကျွန်တော့အဖွဲ့မှ
> အမျိုးသမီးများအားလုံး ဒူးထောက်ဓါတ်ပုံရိုက်၊ ပြီးပြီးချင်း အပြင်မှ
> ရပ်စောင့်တော့သည်။ သို့သော် ထို FIT အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကတော့ အဲလိုမဟုတ်
> မတ်မတ် ရပ်ပြီး ဓါတ်ပုံကို စိမ်ပြေနပြေရိုက်နေတော့သည်။ သူတို့ဖက်က
> ကြည့်တော့လည်း ကင်မရာခွန် ၁ ဒေါ်လာ(သို့) တစ်ထောင်ကျပ် ဆောင်ပြီးပြီ။
> ငါတို့လုပ်လို့ရသည်ဟု စောဒကတက်ဖို့တော့ ရှိသည်။ တကယ်တော့ သူတို့နောက်မှ
> ၀တ်ပြုနေသော ကျွန်တော်တို့ မြန်မာများအတွက် ကသိကအောင့်တော့
> တော်တော်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ ၀တ်လာပြုနေသူများမှ မဟာမုနိဘုရားကြီးအား
> ရည်မှန်းပြီး ၀တ်ပြုနေချိန်တွင် သူတို့ရှေ့မှ နိုင်ငံခြားသူများက
> ကုန်းလိုက်ကွလိုက်ဖြင့် ဖြစ်နေသည်မှာ တော်တော် အဆင်မပြေရှိလှသည်။
> ကျွန်တော် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ ရောက်ခဲ့စဉ်က ကျွန်းနိုင်ငံသေးသေးလေးအတွက်
> တနှစ်လျှင် နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် သန်းချီဝင်နေသည်။
> သူတို့နိုင်ငံသေးသေးမှ ကန္ဒီမြို့ရှိ ထင်ရှားသော မြတ်စွာဘုရား၏
> စွယ်တော်ကို နေ့စဉ် လူဦးရေ ထောင်ပေါင်းများစွာ လာရောက်
> ဖူးမြှော်/လည်ပတ်နေကြသည်။ လာရောက်သူများအားလုံးအတွက် တစ်ဦးပြီး တစ်ဦး
> တန်းစီပြီး စွယ်တော်ကို အတက်နိုင်ဆုံး နီးနီးကပ်ကပ် လူတိုင်း
> ဖူးနိုင်ကြသည်။ ဓါတ်ပုံလည်း ရိုက်နိုင်သည်။ ကြာကြာနေဖို့လည်း
> မစဉ်းစားနှင့်၊ နောက်တခေါက် ဖူးချင်ပါက အဆုံးမှ ပြန်တန်းစီပြီး
> ဖူးပေတော့။ အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ မိမိမှ တရားထိုင် အာရုံပြုချင်သည်ဆိုငြားအံ။
> တန်းစီသူများနှင့် လွတ်ရာတွင် အာရုံပြုနိုင်ပါသည်။
> ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင် အဲဒီလို ခရီးသည် ၀င်ဖို့ဝေးစွ။
> မိမိရည်မှန်းထားသော ခရီးသည် ၁ သန်းပင် မ၀င်သေးပါ။ ကျွန်တော်တို့
> မန္တလေးမဟာမုနိဘုရားကြီးတွင်လည်း အဲသည်လို လုပ်လျှင် ရကောင်းရနိုင်ပါသည်။
> အဲဒီအတွက် မည်သူ့မည်သူမှ အငြင်းပွားစရာမရှိတော့ပေ။
> ကျွန်တော်အကြံပြုချက်သည် ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကို ဝေမျှခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
> မဖြစ်မနေ လုပ်ရမည်ဟု ဘုန်တော်ကြီးရှေ့ ကန်တော့ပွဲ လုပ်ပြနေသည်မဟုတ်ပါ။
> မျိုးမြန်မာ (ဧည့်လမ်းညွှန်)
> မျိုးမင်းဇော် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြော ဧည့်လမ်းညွှန်)
> ဖုန်း 095035603
Posted by Travel at 7:52 AM0comments